सफाई सुझाव - Ningbo BestCleaner कं, लिमिटेड
BVC क्लीनर मद्दत सफा जब डर बिना BBQ पार्टी पकड।
तपाईंले साथीहरूसँग धेरै छ र उनीहरूलाई चकित गर्न चाहन्छु, किन तिनीहरूलाई BBQ पार्टी होस्टिंग द्वारा चकित? तपाईंको गंदा घर केही राम्रो साथीहरूसँग आफ्नो समय रमाइलो लिन को बाटो मा प्राप्त गरौं गर्छन्। कुनै तनाव, बस-गर्न-सजिलो हासिल कार्यहरू - यहाँ तपाईं आफ्नो घर सफा गर्न मद्दत गर्न5चरण योजना छ। त्यसैले जहाँ सुरु गर्न? एक BBQ पार्टी लागि, अतिथि बाहिर आफ्नो अधिकांश समय, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू घरमा सफा गर्न त प्रवेश, खर्च गरिनेछ छन् जीवित कोठा, भान्सा र बाथरूम। पार्टी बाटो ध्यान बरु सम्पूर्ण घर सफा गर्न तर आवश्यक छैन - सबै भन्दा मानिसहरूको ध्यान आफ्नो पेय सेट गर्न टेबल, समतल र स्थानहरू हुनेछ।
1 ताजा र Declutter आफ्नो घर।
यो एक राम्रो पहिलो छाप बनाउन आवश्यक छ त्यसैले तपाईँको अतिथि देख्ने पहिलो कुरा आफ्नो प्रवेश छ। द्रुत कूचो लगाउनु बाहिर, रही कुनै पनि माटो को छुटकारा गर्छन्। त्यसपछि आफ्नो बाटो कुनै पनि अव्यवस्था खाली र दृष्टि बाहिर जूता, जैकेट, टोपी र मेल राख्दै, आफ्नो प्रवेश हल वरिपरि कूचो लगाउनु के भित्र बनाउन र। बन्द टेबल वा सजावटी धूलो र केही deodoriser स्प्रे।
ठाउँ वस्तुहरूको कुनै पनि बाहिर टिप्न, पलङ्गमा, तकिये, तकियों सीधा र refolding फेंकता (- तपाईं BVC उत्पादनहरु को कुनै पनि प्रयोग गरेपछि यो गर्न आवश्यक हुनेछ तर कुनै दाग अप कवर लागि ठूलो) द्वारा सुरु गर्नुहोस्। अर्को एक Microfiber कपडा प्रयोग गरेर तालिका, टिभी स्क्रिन र अन्य धूल सतहहरु सफा। अन्तमा, भुइँमा कुनै पनि धूलो वा पाल्तु जनावर कपाल माथि निर्वात, र आफ्नो निर्वात गरेको ब्रश वा नली संलग्न प्रयोग गरेर आफ्नो झालर बोर्ड सफा गर्न बिर्सनु हुँदैन।
आक्रमणको पहिलो बिन्दु कुनै पनि फोहोर भाँडा आफ्नो डुब्नु खाली सुरु गर्न छ; । तपाईंले रेडियोबिना छ भने बस तिनीहरूलाई कुल्ला दिन र तिनीहरूलाई मा स्ट्याग त्यसपछि राम्रो सफाई को डुब्नु दिन - धेरै सजिलो भएको BVC क्लीनर पक्कै यो काम गर्नेछ - यो एक निष्खोट, कञ्चनपानी तपाईंले गरेको बेला बेसिन हुनुपर्छ! अर्को, तपाईंको काउन्टर भन्दा माथि सफा प्याक टाढा अनावश्यक उपकरण र भान्सा स्प्रे र Microfiber कपडा वा डिस्पोजेबल पोंछे संग काउन्टर तलसफागर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो चुलो, अलमारियाँ र फ्रिज लागि त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि appetisers, पेय पदार्थ र अन्य उपहार लागि कोठा बनाउन उलटफेर, तपाईँको फ्रिज भित्री सफा गर्न एक राम्रो विचार हुन सक्छ। अन्तमा, बाफ आफ्नो भान्सा spick र span छ सुनिश्चित गर्न तल्ला MOP।
5.Last तर सबैभन्दा कुरा सफा बाथरूम Sanctuary
पछिल्लो लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कोठा छोडेर - बाथरूम तपाईं आफ्नो ध्यान अधिकांश ध्यान गर्नुपर्छ कोठा छ। अब यो तपाईंको आफ्नो हात र घुँडा तल प्राप्त गर्न र तल्ला स्क्रब, बरु, सबैभन्दा अतिथि शौचालय जस्तै प्रयोग गर्नेछ कुराहरू सफाई, दर्पण, डुब्नु र काउन्टर होइन। टाढा मंत्रिमंडलों मा या कहीं दृष्टि बाहिर सबै आवारा काउन्टरटप वस्तुहरू पैकिंग सुरु, को डुब्नु, काउन्टरटप दिएर पछि र सबै-उद्देश्य क्लीनर वा BVC क्लीनर असल सफाई दर्पण। सीट, रिम र बाहिरी मा, भित्र, र तपाईं ताजा एक साथ आफ्नो अवस्थित शौचालय रोल प्रतिस्थापन सुनिश्चित - अर्को आफ्नो शौचालय सफा। केही deodoriser वा त्यो स्पा भावना सिर्जना गर्न सुगंधित मोमबत्ती थप्नुहोस्। साथै, नयाँ ताजा र फ्लफी हात तौलिया बाहिर राख्न भूल छैन। अन्तमा, बाथरूम तल्ला राम्रो बाफ भुई पुछ्ने साधन दिन र तपाईं सबै सक्नुभयो।
यो हाम्रो5चरण योजना संग रूपमा सजिलो छ - सफाई आफ्नो पार्टी बन्ने समय को बाटो मा प्राप्त गरौं छैन।